Fampiharana maimaim-poana 8 na ahena, mandritra ny fotoana voafetra (24 Janoary) | Vaovao IPhone
Indray mandeha indray, nifoha aho androany te hitady sy hanolotra anao ny tolotra tsara indrindra misy ny App Store ao fampiharana maimaim-poana, na miaraka amin'ny fihenam-bidy mahaliana, ho an'ny fitaovantsika iPhone, iPad ary iPod Touch. Androany dia manana fampiharana isan-karazany isika, koa jereo tsara, satria azo antoka fa ny sasany amin'izy ireo dia ilay notadiavinao na farafaharatsiny, ho tonga mora raisina.
Ireto misy tolotra sy fihenam-bidy manaraka ireto Fotoana voafetra, midika izany fa maty tsy ho ela izy ireo. Fantatray fa manan-kery izy ireo amin'ny fotoana namoahanay ity lahatsoratra ity, na izany aza, tsy afaka manome toky izahay fa haharitra mandritra ny fotoana lava izy ireo, ary tsy fantatray koa hoe rahoviana izy ireo no lany daty satria tsy ampitan'ny mpandrindra izany matetika. Noho izany, araraoty ny fotoana ary raha liana amin'ny iray amin'ireo fampiharana maimaimpoana na misy fihenam-bidy ireo ianao dia ekeo haingana.
1 Astro 3D +: Torolàlana ho an'ny Sky Night
2 QR Kit Pro: fampiharana tsara indrindra ho an'ny Solution Scan
3 OneDay: Countdown amin'ireo fotoana tsara indrindra amin'ny fiainanao miaraka amin'ny sary sy fahatsiarovana
4 HomeBudget miaraka amin'ny Sync
5 Daty nahaterahana
6 Voarindra - Mametraha tanjona tanjona hanaraka ny lisitry ny fahazarana hanaraka ny pro HD
7 Halaviro kitapo
Astro 3D +: Torolàlana ho an'ny Sky Night
Manomboka amin'ny fampiharana atiny fanabeazana izahay, Anstro 3D +. Izany dia "Atlas astronomika azo entina" natao ho an'ny manam-pahaizana manam-pahalalana momba an'izao rehetra izao sy ho an'ireo mpampiasa te hahalala bebe kokoa.
Ampiasao ny Astro 3D + hahitana planeta, kintana, antokon-kintana, vondron-kintana, vahindanitra ary nebulae izay hitanao arakaraka ny toerana misy anao sy ny fotoanao. Ny Astro 3D + dia hampiasa kompà hanitsiana ho azy ny saritany!
Astro 3D + Izy io dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro, nefa izao, azonao atao izany amin'ny fihenam-bidy 33% amin'ny € 1,99 ihany.
Astro 3D +: Sarintany Sky Night€ 3,49
QR Kit Pro: fampiharana tsara indrindra ho an'ny Solution Scan
Fampiharana ireo izay ampidirinay ao amin'ny sehatry ny fitaovana satria miaraka QR Kit Pro afaka ianao mamorona sy scan ny kaody QR, kaody ary antontan-taratasy mora avy amin'ny iPhone sy iPad-nao.
QR Kit Pro Izy io dia manana vidiny 0,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
QR Kit Premiummaimaim-poana
OneDay: Countdown amin'ireo fotoana tsara indrindra amin'ny fiainanao miaraka amin'ny sary sy fahatsiarovana
Miaraka amin'ny fampiharana Indray andro tsy hohadinoinao indray ny fotoana manandanja indrindra amin'ny fiainanao Azonao atao ny mametraka countdown mba hahatsiarovanao ny fanendrena orinasa lehibe, ny tsingerintaona nahaterahanao ary maro hafa.
Indray andro Izy io dia manana vidiny 0,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
HomeBudget miaraka amin'ny Sync
«HomeBudget dia Tracker miaraka natao hanampiana anao hanaraka ny fandanianao, ny vola miditra, ny faktioranao ary ny fifandanjana kaontinao. Manolotra fanohanana amin'ny teti-bola izy ary mamela ny famakafakana ny fandanianao sy ny fidiram-bolanao, ao anatin'izany ny tabilao sy ny kisary.
HomeBudget Izy io dia misy vidiny mahazatra 4,99 euro, kanefa, izao dia azonao atao izany miaraka amin'ny fihenam-bidy 40% amin'ny 2,99 euro ihany.
HomeBudget miaraka amin'ny Sync€ 5,49
Daty nahaterahana tsy mihoatra ny tsotra fa tsara tarehy "Fampahatsiahivana", mba tsy hanadinoanao ireo daty manokana ireo.
Daty nahaterahana Izy io dia manana vidiny 0,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Voarindra - Mametraha tanjona tanjona hanaraka ny lisitry ny fahazarana hanaraka ny pro HD
Ity dia "fitaovana famokarana tsy manam-paharoa" satria manampy anao tadiavo hoe rahoviana no fotoana mety indrindra hanaovana ny asanao. Mba hanaovana izany dia mamakafaka ny asanao isan'andro izy, manome tolo-kevitra ary manampy anao hanana "fiainana mamokatra sy mandanjalanja kokoa".
Systematic Izy io dia manana vidiny 5,99 euro mahazatra, saingy izao dia azonao atao amin'ny iray ampahatelon'ny sanda fotsiny, 0,99 euro.
Halaviro kitapo Izany dia Fitaovana fanaovana sary feno ho an'ny iPhone misy fiasa matihanina izay "mamela anao hanao sary sy sary amin'ny foto-kevitra isaky ny na aiza na aiza no misy aingam-panahy."
Powered by ny maotera Silica 64-bit revolisionera mitovy amin'ny zokiny lahy, Procreate Pocket ™ dia natao hanararaotra ny fitaovana iPhone® (indrindra ny iPhone 6 sy iPhone 6 Plus). Ataovy an-tsary ny diany, ary AirDrop ny asanao mankany iPad hanohizana ao amin'ny Procreate®.
Halaviro kitapo Izy io dia misy vidiny mahazatra 2,99 euro, kanefa, izao dia azonao atao izany miaraka amin'ny fihenam-bidy 66% amin'ny 0,99 euro ihany.
Halaviro kitapo€ 5,49
ChipPhoto mamela anao io zarao ho faritra toradroa ny sarinao. "Ny singa tsirairay dia azo afindra amin'ny toerana rehetra amin'ny sary ary azo ovaina daholo ny habeny."
ChipPhoto Izy io dia manana vidiny 1,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Fampiharana maimaimpoana 8 na misy fihenam-bidy, mandritra ny fotoana voafetra (24 Janoary)